Thu, Jan 20, 2022 | 04:32:42 NST
Total Hits: 21.3 K
एक महिलालाई कुटपिट भयो । घरबाट निकालियो । दुव्र्यवहार भयो । घरमा सम्मान पाइनन् भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईं के सोच्नुहुन्छ ? धेरैलाई लाग्न सक्छ महिला नै गलत हुन् ।
यस्तै कारणले कति महिलाहरुले आत्महत्या गरेका छन् । कति महिलाहरु घरबाट निकालिएका छन् । हत्या भएको छ । कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् ।
मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रुपमा धादिङमा रहेर काम गरिरहँदा मैले यस्ता समस्याहरु धेरैको घरमा भेटेको छु । ‘महिलाले यति त सहनु पर्‍यो, यस्तै हुन्छन, उस्तै हुन्छन’ भन्नेहरु धेरै भेटेको छु ।
एकैछिन महिला भएर सोचौं त ? सबैकुरा उनीहरु कसरी सहन्छन् होला ? हामीले सुनेजस्तो महिलाको सहने शक्ति बढी भएर हैन बध्यताले सहेका हुन् । र, सहन बाध्य बनाइएको हो ।